संसदमा कांग्रेसको अर्घेल्याइँ :: Setopati
संसदमा नाराबाजी गर्दै कांग्रेस सांसद। तस्बिर : नारायण महर्जन/सेतोपाटी
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधले प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठक स्थगित भयो।
युरोप भ्रमणबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समसामयिक विषयमा संसदमा सम्बोधन गर्ने कार्यसूची भए पनि कांग्रेस सांसदले रोष्ट्रम घेरेर नाराबाजी गरेपछि निर्धारित समयभन्दा एक घन्टापछि सुरू भएको बैठक बुधबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपहिले संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बोल्न पाउनु पर्ने अडान कांग्रेसको थियो। आफ्ना सभापतिलाई पहिला बोल्न नदिने भएपछि कांग्रेसले संसद अवरूद्ध गर्‍यो।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले कार्यसूचीअनुसार नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई बोल्न समय दिएका थिए। बोल्नका लागि प्रधानमन्त्री रोष्ट्रममा पुगे पनि बोल्न पाएनन्।
संसदमा प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले आफूले चाहेको समयमा बोल्न पाउने चलन छ। तर कसलाई कतिबेला बोल्न दिने टुंगो लगाउने जिम्मा सभामुखको हुन्छ।
त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले स्वभाविक रूपमा संसदलाई सम्बोधन गर्न लाग्दा कांग्रेसको अवरोध किन त?
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाण प्रधानमन्त्रीले बोल्न नपाउनुमा सभामुख महराको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँछन्।
‘हामीले बिहानै सभामुखलाई भेटेर बोल्ने समय मागेका थियौं। सभामुखले हुन्छ पनि भन्नुभएको हो। तर उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएनछ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिला देउवा किन बोल्नु पर्ने त?
प्रतिपक्षीले उठाएका विषयको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनु सुल्टो बाटो भएकाले आफूहरूले त्यस्तो माग गरेको खाणले तर्क गरे।
उनले देउवा बोल्ने समयबारे सभामुखले सहमति जनाएको दाबी गरे।
‘पहिला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बोल्ने त्यसपछि एकछिन संसद स्थगत गर्ने र दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कुरामा सभामुख सहमत हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बोल्छु भन्नुभएछ त्यसपछि हामीले संसद अवरूद्ध गर्‍यौं। संसदमा प्रतिपक्षले बोल्न पाउनुपर्‍यो नि!’
सरकारले ल्याएका मिडिया काउन्सिल, गुठी, सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विधेयक र विरोधमा आन्दोलन भइराखेकोबारे देउवाले धारणा राख्न खोजे पनि समय नदिइएकोले संसद अवरूद्ध गर्नु परेको खाणले बताए।
प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिला प्रतिपक्षी दलका नेता बोल्ने परम्परा छ र?
खाणले भने, ‘परम्परा भन्ने कुरै भएन। सदनमा प्रतिपक्षी दल बोल्न त पाउनुपर्‍यो नि!’
पहिला प्रतिपक्षी दल बोल्न समय दिएको भए प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन सहज हुने उनले बताए।
उनले प्रधानमन्त्री युरोप जाँदा पनि भ्रमण र कार्यक्रमबारे सदनलाई जानकारी नदिइएको बताए।
‘प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण जाँदा सदन चलिराखेको छ भने सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘युरोप गएको पाँच दिनपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्रमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सम्हाने जानकारी आयो।’
लोकतान्त्रिक र संसदीय पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्नै नदिएको आरोप लागेको छ नि! भन्ने प्रश्नमा खाणले प्रधानमन्त्रीले संसदको मर्यादा कायम राख्न नसकेको पनि बताए।
‘सांसदको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले गैरसंसदीय भाषा बोलेर मर्यादा तोडिसक्नुभएको छ। हामी त संसदीय मर्यादाभित्रै छौं,’ खाणले भने।
प्रधानमन्त्रीले भन्दा पहिला बोल्न पाउनु पर्ने कांग्रेसको अडानलाई सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसदीय मर्यादाविपरीत भएको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बोल्ने संसदको परम्परा छैन,’ नेम्वाङले सेतोपाटीसँग भने, ‘सबै हिसाबले प्रधानमन्त्री प्रोटोकलमा एक नम्बरमा हो। प्रधानमन्त्रीले बोल्ने भनेपछि सरकारले बोल्ने भनेको हो नि!’
प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि प्रतिपक्षी दललाई बोल्न समय दिने सभामुखले बताउँदाबताउँदै पनि अवरूद्ध गर्नु दु:खद भएको उनले बताए।
‘प्रधानमन्त्री बोल्न जाँदा बोल्न दिइएन। उहाँ रोष्ट्रममै उभिइरहनुभयो,’ उनले भने, ‘यसबारेमा सबैले निधार खुम्च्याएर सोचौं, यसले हामीलाई कता लैजाँदैछ?’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ३, २०७६